Izindaba - Izinzuzo zezinkomishi zekhofi
Inkomishi yekhofi yenziwa ngokumunca i-ion powder, i-tourmaline, ubumba lwekhwalithi ephezulu nezinye izinto eziyisisekelo. Ukuxakaniseka okuphezulu kwama-ion amabi akhishwe yindebe yekhofi ephezulu kungawakha amanzi ngamanzi, kukhiqize ama-ion e-hydroxide akhokhiswe kabi, kwenze amaqembu ama-macromolecular emanzini abe mancane, futhi kuthuthukise ukuncibilika nokungena kwamanzi. Ngakho-ke, amanzi okuphuza asenkomishini yekhofi anekhono elinamandla lokuncibilikisa isiphuzo, futhi umphumela wesiphuzo ungcono. Thela amanzi enkomishini yekhofi ukwandisa umsebenzi wamanzi, ulawule uketshezi komzimba womuntu, ulungise ibhalansi yomzimba we-yin ne-yang, ukhuthaze imetabolism, uthuthukise ukusizakala komuntu, futhi ube nomphumela omuhle wokunakekelwa kwezempilo nezempilo ekunciphiseni izifo ezahlukahlukene.
Kunezinhlobo eziningi zezinto zekhofi zekhofi, njengezitsha zobumba, insimbi engagqwali, i-bone china njalonjalo. Ubumba nobumba bobabili kucwebezelisiwe futhi kwaxoshwa. Ukuthungwa kobumba kubi kakhulu futhi kumunca kancane. Uma i-glaze iwa, leyo ngxenye izongcoliswa kalula futhi ayikwazi ukugezwa; i-porcelain inokuthungwa okuhle futhi ayimunce amanzi, futhi-ke intengo izobe iphakeme kakhulu; Indebe ye-bone china inokulondolozwa okuhle kokushisa, okungagcina izinga lokushisa lekhofi elisenkomishini, kepha intengo iphezulu ngokweqile; inkomishi yensimbi engagqwali kabili inezingqimba ezinkulu zokushisa, iqina futhi ngeke igqokwe, intengo ingconywana kunekhofi le-bone china, kepha ayinabo ubulili obuhle
Ukuba lula kwenkomishi yobumba nokuzungeza kwenkomishi ye-porcelain kukhombisa izimo zekhofi ezahlukahlukene.
Indebe yePottery: Inokuthungwa okuqinile futhi ilungele ikhofi ejulile eyosiwe enambitheka eqinile.
Indebe ye-porcelain: okuvame kakhulu, ingahumusha iphunga elibucayi lekhofi. Phakathi kwazo, inkomishi yekhofi le-china eyenziwe ngobumba obusezingeni eliphakeme lase-china futhi exutshwe nesidlo sethambo lesilwane inokukhanya okulula, umbala othambile, ukuqina okukhulu nokulondolozwa kokushisa okuhle, okungenza ikhofi elisenkomishini lehlise izinga lokushisa ngokunensa, futhi iyona ekwazi kakhulu ukuveza ukunambitheka kwekhofi Ukukhetha okuhle.